साम्राज्ञीलाई साइन गराउँनै मुस्किल « Ramailo छ
साम्राज्ञीलाई साइन गराउँनै मुस्किल
तपाईं नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई कुनै फिल्मको लागि प्रस्ताव गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंको त्यो योजना सफल हुने छैन । साम्राज्ञी तत्काल कुनै पनि फिल्म साईन गर्ने पक्षमा छैनन् । किन त ?
किनभने साम्राज्ञीले कम्तीमा एक वर्षका लागि नयाँ फिल्म साइन नगर्ने निर्णय नै गरिसकेकी छन् । आर्यन सिग्देलको ‘कायरा’ र ‘ईन्टुमिन्टुु लण्डन’ मा पछि मात्रै साम्राज्ञीले नयाँ फिल्म साईन गर्ने बताउँछिन् । यी दुई फिल्मको छायाँकन सकेर रिलिज हुंन कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । उसो त चैत २३ मा साम्रागीको तिमी सँग पनि रिलिज हुँदैछ । अहिले त स्क्रिप्ट पनि सुन्दिंन, साम्राज्ञी भन्छिन् । यो रमाईलो भिडियो हेर्नुस् :
निर्माता सुवास गिरीले बनाउने फिल्म छाडेकी साम्राज्ञीले आर्यनको बाहेक कुनै पनि फिल्म साइन गरेकी छैनन् । साम्राज्ञीलाई आफ्नो फिल्ममा साइन गराउँन दर्जन बढी निर्माता लाइनमा छन् तर उनले समय नै दिइरहेकी छैनन् ।